PE Marine Pedhira Kuchenesa Mutsara - China PE Gungwa Inokanganisa Extrusion Line Mutengesi, Fekitori -Jwell
Iyo epurasitiki zvinhu zvinoshandiswa mumapurasitiki ekuredza hove zvakasarudzika yakagadzirirwa gungwa aquaculture. Iyo yakasimba anti-kuchembera uye anti-ultraviolet zvinhu. Inoda kuwedzera anti-kuchembera, anti-oxidation, anti-ultraviolet uye mamwe akakosha ekuwedzera. Kazhinji, inogona kushandiswa anopfuura makore gumi pasina matambudziko. Iyo nyowani yepurasitiki yekuredza raft inogona kuramba kurwisa kwesupp typon uye parizvino ndiyo inonyanya kukodzera zvinhu zvegungwa aquaculture mumaguta emahombekombe.